Ukuze ube soloko uhamba ngokukhawuleza, unobulumko kunabo bonke, unamandla kakhulu-enomqondo onamandla kwaye ubonakala unengqiqo. Fumana ezininzi iikomityi kunye nediploma - ekuqaleni ubone into encomekayo. Leyo yinto ephela kukuba yonke iilindali nganye inomda. Yintoni enokuba ngumnqweno wokuba yinombolo 1 kuyo nayiphi na inyawo kwaye le nto ivela kuyo? Ubunkokheli bendabuko yintlondlo yesibini okanye ingxaki yobomi bonke? Funda - konke malunga nawe.
I-Round 1: Umdlalo ofanelekileyo.
Ujwayele ukwenza yonke into ndawonye-ukukhwela i-greats uze uhlambe echibini, ukuxubha ibali uze uphume kwiholide, uqobe ama-apula ebhentshini uze ukhanyise entliziyweni yomdaniso. Ngomhlobo ongcono kakhulu kunye ne-akhawunti kwindlu yekhofi, kwaye i-suitcase ekuhambeni kolwandle iyahlula ezimbini. Enyanisweni, ngokugcinwa: ezimbini - ayithethi ngamashumi amahlanu anamashumi amahlanu. Ulungele ukuboleka ama-movie amasha, izicatshulwa zeenwele kunye ne-nail polish. Kodwa inkokeli ayihlose ukunika ijezi. Ngaphandle, le ngxabano ayinakuphikiswa: uhlala ugijimelana omnye entanyeni ngokumemeza "Wow!". Kodwa, xa uvula iingalo zakho, uyayibona kwaye ukhangele ngengqondo: "Ndilahlekelwe isisindo, ndafumana i-sunburnt, ndinqumla iinqwelo zam ... Izicathulo ezinjengeCarrie ngethuba lesithathu". Ukukhathazeka, umona omncinci, ukungoneleliswa nawe ngokwakho usoloko ugubungela intloko xa isithombe kwibhodi lozuko siphezulu kunakho. Kwaye uza kwenza konke ukufumana isihloko sesiphumo esona siphumo sazo zonke ukhuphiswano kuwe. Ngobuso obungenacala, thumela umngane ukuphula ii-burgers kunye ne-cola, ukukhokelela ekupakeni amanqaku kwisidlo semifuno. Awuyi kuphawula ityala kwiTekhthi lakhe, uncedise ukulungiselela usuku. Ukuvuma ngokugqithiseleyo kwisigumbi esifanelekileyo, ungathuli, ukuba kule jekethi kufana nesipolisi somlothi. Kwaye ngokukhawuleza sikhalaza kwiqabane lakhe elitsha: ephupheni uyabhuqa njengendoda enkulu.
I-Round 2: Ukulwa neKlabhu.
Kule minyaka edeleyo, xa ungakhange ucinge ukuba kutheni amakhwenkwe namantombazana ahluke kakhulu, ukubeka abafana endaweni yabo kwakuyinto ethanda umdlalo. Wenyuka umthi ngokukhawuleza kunanoma ubani, wagijima ukusuka emthonjeni waya emthini wemthi yomdala waza wagibela ngebhayisiki emgodini, ehleka ngokukrakra kulabo babambelele ngezandla ezimbini emva kwevili. Ukuba intombazana kule nkalo yayinokuhlonipha - ungadlala idodoli kwaye ukhale, uhlambe idolo lakho, kodwa endaweni yoko wabonisa isibindi namandla okucinga. Ulwabelana ngesondo olwahlukileyo kwaye wathwala kunye naye ukuba athathe iipulo kumyezo ongummelwane. Ngoku ukhulile - bajikijela ukunyuka ezicingo baze baxolise ku-Uncle Kolya kwisityalo esilahlekileyo. Amakhwenkwe atshintshe kakhulu kwiimoto zokuqala, aguqulwa esuka "kwiqhawe" ukuya kwiCorter-Strike kwaye ayeka ukutshintshela amantombazana. Ewe, kwaye ukhohliwe ukuba kwakuba yinto ekhohlakeleyo, kodwa indlela eyintando yokuncedisa abafana abagcinwe kwi-arsenal. Ukuba kuyimfuneko, yenza i-back-flip kwi-skateboard kwaye, uhleli emva kwevili, unomdla ukwenza iipolisa ngokujika. Ubamba ubukeka obuhle kwaye ulinde, xa omnye wabo uya kuphoswa ngento enokuvakalelwa ngayo.
I-Round 3: Umzabalazo weklasi.
Indawo kwindawo eyokuqala oyinqobileyo ngokukrakra okunje, ngokungathi endaweni yesifundo se-physics, i-concert yokuqala yaseYustin Timberlake kwisixeko sakho isiza kuqala. Ngombulelo wolwazi, ungasindisa ngokomoya: pha kamisa isandla sakho - iindlela ezintathu kunye neziqhwala, uphumelele ebhodini - izibini ezimbini kunye nesigaba sezemidlalo. Amanqaku ahloniphekileyo axhamle kumaphephancwadi, kwaye abazali bafuna idayari yakho kuphela kwimibhiyozo yentsapho - ukuziqhayisa ngempumelelo yentombi ehlakaniphile. Eklasini ungomnye onjalo. Bonke abanye bancitshiswe phantsi: nangona umntu sele esondele kuwe kumgca wokugqibela, ubonisa ngokukhawuleza umchasi emva kwesangqa, ekulawuleni ukufihla izinto zakho zenzululwazi kunye nephepha. Ukwabelana nomntu ohloniphekileyo kwindawo ongeyona nto uyenzayo. Ulungele ukuya kwinto nayiphi na, ukuba ngaba kuphela abahlanu kuphela eklasini baya kuwe.
Ukuziphakamisa ngokuphakamisa impumlo yakho kwisinyathelo sakho sokuqala esingenasiphelo, awukhawulezi ukuba ubalekele iziphumo zomzabalazo ongapheliyo. Okwangoku, ngokwemivuzo yeenxa zonke - ngaphezu kwerekodi yokunqoba - ungenza uluhlu lwelahleko. Okwesibini maxa wambi ngamanye amaxesha ayedlulela kuqala. Ndiyintombi yam, akuyiyo yonke into. I-trifle ye-trifle, inkcukacha malunga nenkcukacha - ngokuthe ngcembe ucingo lukhula phakathi kwakho. Mhle, nkqu, uyisithulu. Kuhlala nje ukuyipenda kwi-yellow yellow yakho-umbala wejezi yekhokeli. Khumbula ukuba emva kwakhe kwakukho umntu osondeleyo kuwe.
Xa le nkwenkwana iphupha, yonke into ayibuhlungu kakhulu, kodwa ayiyivuyo kakhulu. Ewe, ngolunye usuku, uya kunika ingqalelo kuwe kwaye anikezele ukuhamba ngomoya ebusuku. Uya kuxubusha naye yonke inzuzo yebhokisi yebhokisi yebhokisi kwaye uncede ukhethe iivili ezinamavili. Sekusekuseni, uya kukuthabatha waya emnyango aze athethe izandla. Zonke izicatshulwa zakho zokubanga akayikuzihoxisa. Unokuba ngabahlobo-kungekho. Ngenxa yokuba zininzi izinto oziqonda kangcono kunalo. Iilente zenu zoqeqesho kunye nolwazi lweencwadi zaseYurophu aluyi kuhlazisa. Kodwa iikhomputha, imoto kunye nemidlalo ephezulu yintsimi yabasetyhini apho kufuneka babe yiingqungquthela. Emva kokuba ubonakalise ulunge, ubonisa ngokuzenzekelayo ukuba uyingozi. Ukuba uziva ngathi ulahlekile eduze kwakho, into yokuqala ayenzayo kukunyusa umgama. Uqaphele okanye akunjalo - ngaba kunjalo? Nabafundi ofunda nabo, yonke into ayiyi kuba yishukela nhlobo. Ewe, unesiqinisekiso esikhulu, kodwa ungalindelanga ukuba i-albhamu yokugqibela izakuzaliswa ziinqwenela ngokunyanisekileyo kumakhelwane kwidesksi. I-glitter ye-medal yegolide igqithise kakhulu kangangokuthi ukhohliwe oko ufundiswa esikolweni. Ukongezelela kwiifomula, iifomore nemigaqo yograma, kukho enye into-ukususela ngomhla we-1 ukuya kwe-11 awunanto yokunyanzeliswa ukuba usebenze kwiqela. Yodwa, musa ukulungiselela i-KVN, musa ukubeka i- "Mumu" kwinqanaba lenkundla yebandla, ungagxininisi kwikhabhinethi yomlando ukukhanya. Ukukhuphisana nayo yonke into kunye nayo yonke into, ulahlekelwa liqela elixhasayo. Yaye enye, njengokuba uyayazi, ayiyena mfazwe entsimini.
Kwingqondo kwengqondo into enjalo - inkokhelo. Ithetha into efana nale: xa uziva ulahlekile, awuphumelelanga kwelinye lemiqathango, uzama ukuqonda, gxuma phezu komntu wonke kwenye. Ngamanye amazwi, emva kobunzima bakho, umzabalazo wokunyanyisa kuwo wonke umlenze wobukhulu obuhlangene nendlela, ume - voila! - ezizodwa ezixhamlayo. Cinga ngako - yintoni eyenza ukuba ubeke iirekhodi, ukuba ukhawuleze, uphakame, unamandla? Mhlawumbi uzicabange nje ngeyona nto enhle, ngoko wakhuthaza: "Kodwa ndiyindoda," ukuqokelela ezintlanu kuphela kwidayari yam kwidayari yam? Mhlawumbi, ukunqoba kwakho kwintsimi ye-skate kubangelwa ukugxekwa ngabahlobo-abafana kunye nomnqweno wokubonisa ubungqina bakho kubafana abangcono kunokuba bacinga ngawe? Mhlawumbi mhlawumbi, ukunyamezela kwakho ukuzityhalela intombazana ivela kumnqweno wokunqabana ukuzimela ngokusesikweni sayo, ukugxotha ukungathandabuzeki, ukubonakalisa ukuba unokuyidlula yonke into? Isiphumo sinomtsalane ngakumbi, ukuba iingxaki ziza kulwa ngokuthe ngqo, kungekhona iindlela ezigqithiseleyo. Kwenzeka njani le nto, ufunde nje kwinqaku elingaphambili.
Kwaye emva koko, ukugijimela esizweni kukunceda ukuba ungemi. Indlela yokukhuphisana ibeka isicwangciso esifanelekileyo-phambili nangaphezulu. I-Perfectionism ikufundisa ukuba wenze yonke imizamo ukufanisa okanye ufune ukuxhuma phezulu kuneendawo. Kwaye umnqweno wokukhuphisana uvuselela kwaye uhlasele ukulwa nomvuzo oyintloko, nokuba ngaba uthando lwabafundisi, inhlonipho yabahlobo okanye isihloko se-Miss Universe. Yaye yonke into iya kuba yongaphelelanga - phantsi kwemeko enye: ukuba ufunda ukungajongi. Ngokwakho uluvo, emncintiswaneni wokuphelela, uvuyo oluvela kwindawo yokuqala aluba luphelele xa umntu engathathi inyathelo kunye namanani 2 no-3, akunjalo? Ndiqinisekile ukuba yonke into iyaziwa kuphela ngokuthelekisa? Kwaye akukho apha.
Ukusebenza phantsi kwesiqubulo esithi "ukubamba kunye nokuphuma kuzo zonke iindleko!", Kulula ukuphuma kwindlela yakho kwaye ufumane umvuzo womnye umntu, owenene ngokwenene awuyi kuba yimfuneko.
Ewe, vumelani, ukuba ungekho nto, awuhambanga kuzo zonke iintolo ezinqambileyo ozichukumisa ngokukhawuleza ukucima amehlo omhle womhlobo. Yivume, ukuba kwakungengenxa yomnqweno wokuphuma ngaphandle kwamakhwenkwe, uya kuvuyela ukuphuma kwi-skate, ukutshintshana kwindlela emzimbeni. Kwaye imisebenzi kaMendeleev-Klaperson Pascal noHooke bayasuka emkhombeni, befaka indawo yabo iWilde, i-Maupassant kunye ne-Exupery. Ngoko kukuthintela ntoni? Nguwe kuphela. Ubomi - kungekhona ukugijima enye kuyo yonke ibanga elide. Isohlwayo ayidlala iindidi eziqhelekileyo kunye kunye kuphela. Wonke umntu unesiqalo sakhe, indlela yakhe, izigaba zakhe eziphakathi kunye neenkompo zakhe kumgca wokugqibela. Ziyinjongo yakho yokwenene. Ixesha lokumisa, ukusetha isitophuwashi uze ujikeleze indawo. Cinga malunga nokuba ugijime apho kwaye ngenxa yokuba ukhawuleza, kwaye ingaba umgomo wakho wangempela ulahlekelwe yimpumelelo. Ukuba uyaphendula ngokunyanisekileyo le mibuzo - awuyi kuphinda ulwa nentloko yakho nxamnye nemingcele yabantu. Exhale. Kwaye ngokuphindaphindiweyo uhamba ngendlela - kwiikomityi zakho kunye neebhaso, okwakusele ulinde ekugqibeleni.
I-psychology yokwahlukana nentanda yakho
Ama-noodle e-egg kunye ne-soy sauce
Unyango lwe-tonsillitis engapheliyo kunye nezilwanyana zamalungu
Cookies ze Cookies